Toe Puff နှင့်ကောင်တာ၊ ရှူးဖိနပ်၊ အီဗာ Insole - Wode ပစ္စည်း
ping pong ပူအရည်ပျော်စာရွက်
ချုပ် bonded ထည်
Fine ပြား၊ ဝါယာကြိုးနှင့် PV ဖဲကြိုးဝါယာကြိုး
ထုတ်လုပ်သူ shoe shank board အတွက်ထုတ်လုပ်သူ shanks material board
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာဖော်ပြချက်အညွှန်း: ဖိနပ်အစွန်ခံပစ္စည်း Shank Board ထုတ်လုပ်သူအထူ: 0.60mm, 0.80mm, 1.00mm, 1.20mm Shank Board အရွယ်အစား - စာရွက်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ လိပ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်းလျှင်စာရွက်အရွယ်အစား 36″ X 60″, 40″ X 60″ ၁.၀၀ မီတာ ၁.၅၀ မီတာ (သို့) ဖောက်သည်၏တောင်းဆိုမှုအရ၊ လိပ်အရွယ်အစား ၁.၀၀ မီတာအကျယ်သို့မဟုတ်ဖောက်သည်၏တောင်းဆိုချက်အရဖြစ်သည်။ အရောင်: Shank Board အတွက်ရောင်စုံ။ ပစ္စည်း - ကောင်းမွန်သော polyester ထည်၊ ကော်၊ အရည်ပျော် MOQ: Shank Board အတွက်စာရွက် ၅၀၀ အရည်အသွေး။ အပူချိန်နိမ့်ခြင်းနှင့် ...
Eva နှင့်အတူစက္ကူ insole ဘုတ်အဖွဲ့
ကုန်ပစ္စည်းပစ္စည်း: ပြန်စက္ကူ၊ ကော်၊ အီဗာစာရွက်စက္ကူအတွင်းသုံးအရောင် - ပန်းရောင်၊ ပန်းရောင်၊ အဖြူရောင် EVA အရောင် - အဖြူ၊ အနက်၊ အဝါ၊ OEM အရောင်။ အထူ: ၁.၀ မီလီမီတာမှ ၂.၀ မီလီမီတာအများအားဖြင့် ၁.၂၅ မီလီမီတာ၊ ၁.၅ မီလီမီတာ၊ ၁.၇၅ မီလီမီတာ၊ ၂.၀ မီလီမီတာ၊ အရွယ်အစား - ၃၆” * ၅၄”၊ ၄၀“ * ၆၀”၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: eurotex, wodetex Strong ကော် (အကောင်းဆုံးတစ်ခု), အဖြစ်များသည့်ကော် (ပိုမိုကောင်းမွန်သောတစ်ခု), သို့မဟုတ် Water Glue ။ MOQ: 1000sheets ထုပ်ပိုးခြင်း - စာရွက်ဖြင့်၊ အိတ်တစ်လုံးလျှင်စာရွက် ၂၀ - အသေးစိတ် 1. ၁။ လုပ်ဆောင်ချက် ၁။ ကောင်းမွန်သောမာကျောမှု၊ ရေခံနိုင်မှု၊ ခေါက်။ တည်ငြိမ်မှုရှိသည်။ ၂ ။
ကုန်ပစ္စည်း ၁။ Eva နှင့်မွမ်းမံထားသောသုတ်ဆေးဘုတ်သည်အဓိကအားဖြင့်ဖိနပ်အူအတွင်းပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။ အသုံးပြုမှု: ဖိနပ်အူအတွင်းအထူ: Fiber insole board: 0.9MM ~ 3.0MM Eva: 1.0MM ~ 4.0MM အရွယ်အစား - စာရွက်အားဖြင့် 0.914M x 1.37M နှင့် 1.00M x 1.50M အရောင်: Eva မည်သည့်အရောင်မှမမှောင်ပါ။ Gule: စူပါ gule သို့မဟုတ်အဖြူရောင်စေး။ ပစ္စည်းများ: Fiber insole board ကိုအမျှင်ဓာတ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအဖြူနှင့်ရှုံးနိမ့်သည်။ နောက်ထပ်ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်: အထူအရွယ်အစား loading 20ft 1.0 ...
Antistatic Insole ဘုတ်အဖွဲ့
ကုန်ပစ္စည်း 1. အထူ: 1.25MM, 1.50MM, 1.75MM, 2.00MM, 2.50MM, 3.00MM MOQ: 1000 စာရွက်များတင်ပို့ဆိပ်ကမ်း: Xiamen ငွေပေးချေမှုသတ်မှတ်ချက်များ: အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုမပြုမီသိုက် 30%, 70% ချိန်ခွင်လျှာ BL ဆဆပ်ပေးဆောင်ရပါမည် copy ထောက်ပံ့မှုစွမ်းရည် - တစ်နေ့လျှင်စာရွက်ပေါင်း ၂၀၀၀၀ ပေးပို့မှု - ၇-၁၅ ရက်အကြာတွင်အမှာစာအတည်ပြုပြီးအသေးစိတ်အချက်များ ၁။ အလုပ်လုပ်ခြင်းခိုင်မာခြင်း၊ လမ်းလွဲခြင်းနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်း၊ ကောင်းသောဖောက်ခြင်းနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း။ 2.Application လုံခြုံစိတ်ချရသောဖိနပ်၏အတွင်းခန်းနှင့်ခရီးဆောင်လက်ဆွဲအိတ်နှင့်လက်ဆွဲအိတ်များတွင်အသုံးပြုသည်။
Eva နှင့်အတူ 100% polyester interlock နံရံထည် laminate
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်အညွှန်းကိန်းများ - EVA ပါ ၀ င်သည့်သံထည်ပစ္စည်းများကိုဖိနပ် EVA ပါ ၀ င်သည့်သံထည်ထုတ်လုပ်သူအထူ - 0.60mm, 0.80mm, 1.00mm, 1.20mm - EVA အရွယ်အစား - စာရွက်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လိပ်။ ဖြစ်စေအရွယ်အစား - စာရွက်အရွယ်အစား ၃၆″ x ၆၀″၊ 60 X 60″ နှင့် 1.00mx 1.50m သို့မဟုတ်ဖောက်သည်၏တောင်းဆိုချက်အရ၊ လိပ်အရွယ်အစားသည် ၁.၀၀ မီတာအကျယ်သို့မဟုတ်ဖောက်သည်၏တောင်းဆိုချက်အရဖြစ်သည်။ အရောင်: EVA ပါ ၀ င်သောအချောထည်များအတွက်အရောင်အသွေးစုံလင်သော EVA ပစ္စည်း - ကောင်းမွန်သော polyester ထည်၊ ကော်၊ EVA MOQ: lami အတွက်စာရွက် ၅၀၀ ။
2020 ရေမြှုပ်နှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် 100% polyester ထည်
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်အညွှန်းကိန်း l ဖိနပ်ဖြင့်ဖုံးထားသောပစ္စည်း material ရေမြှုပ်ကောင်ထည်ကုန်ပစ္စည်း Th ၀.၆၀ မီလီမီတာ၊ ၀.၈၀ မီလီမီတာ၊ ၁.၀၀ မီလီမီတာ၊ ရေမြှုပ်ကောင်ထည်အတွက် ၁.၂၀ မီလီမီတာအရွယ်အစား sheet စာရွက်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ လိပ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ စာရွက်အရွယ်အစား ၃၆″ x ၆၀″၊ ၄၀″ X 60's နှင့် 1.00mx 1.50m သို့မဟုတ်ဖောက်သည်၏တောင်းဆိုချက်အရ၊ လိပ်အရွယ်အစားသည် ၁.၀၀ မီတာအကျယ်သို့မဟုတ်ဖောက်သည်၏တောင်းဆိုချက်အရဖြစ်သည်။ အရောင်： ရေမြှုပ်နှင့်အတူထည်အတွက်အရောင်ပစ္စည်း: ကောင်းမွန်သော polyester ထည်ရေမြှုပ် MOQ: ရေမြှုပ်ကောင်နှင့်အတူထည်အဘို့အ 500 စာရွက်များ ...
ချုပ် bondw nonwoven ထည်
အပ်ထိုးလာကြတယ် nonwoven ထည်
အရောင်းရဆုံးသော EVA စာရွက်များစိတ်ကြိုက် anti-static EVA ရေမြှုပ်စာရွက်
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း - eva ကုန်ပစ္စည်းအမည် - EVA စာရွက် - ထုပ်ပိုးခြင်းဖြင့် - roll roll ဖြင့် MOQ: ၁၀၀၀ မီတာနမူနာ - အခမဲ့အသေးစိတ် ၁။ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း - ကျွန်ုပ်တို့မှသင်ရောင်းချသောထုတ်ကုန်အားလုံးသည်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိသည်။ ၂။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ ၃။ ထုပ်ပိုးခြင်းအသေးစိတ်များလိပ်ခြင်းဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသည်။ လိုအပ်လျှင်ပလပ်စတစ်ပုံနှိပ်နိုင်ပါတယ်။ သတင်းအချက်အလက်ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် PDF ဖိုင်ကိုပုံနှိပ်ခြင်းစီစဉ်ရန်လိုအပ်သည် သင်တို့၏အပြောအရ ၀ န်ဆောင်မှုများ 1. ၂၄ နာရီအတွင်းအရည်အသွေးမြင့်မားသောယှဉ်ပြိုင်မှုအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်သင့်ကိုကိုးကားမည်။
ထုတ်လုပ်သူ Nonwoven ဓာတုစာရွက်ဖိနပ် Toe Puff နှင့်ကောင်တာစာရွက်
ပူပြင်းသောကော်ကော်ဖိနပ်ဖိနပ် Puff နှင့်ကောင်တာပစ္စည်းများ
ကျွန်ုပ်တို့ကျွမ်းကျင်စွာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်တင်ပို့ခြင်း - Nonwoven Chemical Sheet၊ Nonwoven Fiber Insole Board, Stripe Insole Board, စက္ကူနှင့် Cellulose Insole Board, EVA Hot Melt ကော်ကော်စာရွက်၊ Pingpong Hot Melt, အထည်ပူအရည်ပျော်၊ ကတ္တီပါပူ metl၊ TPU Film၊ Polyester Nonwoven အထည်အလိပ်၊ Stitch Bonded ပိတ်ထည်၊ EVA စာရွက်နှင့်အတူ Insole Board Coatting၊ ရေမြှုပ်နှင့် Eva ပစ္စည်းများစသည်တို့နှင့်အထည် Coating ။
တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်မဟုတ်သည့်အထည်, အီဗာနှင့်အတူစက္ကူ Insole ဘုတ်အဖွဲ့, Eva အမြှုပ်နှင့်အတူ Laminated Nonwoven အထည်, ဖိနပ် Insole ပစ္စည်းစာရွက်, Eva နှင့်အတူရက်ကန်းထည်, အီဗာနှင့်အတူ Insole ဘုတ်အဖွဲ့,